सेयर बजार Archives - Lokpati.com
Tag - सेयर बजार
पूँजी बजार सुधारको माग गर्दै आमरण अनसन
काठमाडौं। पुँजी बजार सुधारको माग गर्दै सेयर बजारका लगानीकर्ता तिलक कोइरालाले आमरण अनसन सुरु गरेका छन्। पुँजी बजार विकास र विस्तारका लागि गर्नुपर्ने काम नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले नगरेको...
साताको अन्तिम कारोबारकाे दिन यस्तो रह्यो सेयर बजार
काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीवार बजार २ हजार ४७५ दशमलव २६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। यो दिन बुधवारको भन्दा बजार ८ दशमलव ३४ अंक बढेको हो। २ हजार ४७९ दशमलव ६१ विन्दुदेखि खुला भएको बिहीवारको बजार १३ मिनेट अवधिको...
सेयर बजारको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्न माग
काठमाडौं । स्टक ब्रोकर एसोशिएसन अफ नेपालले पुँजी बजारका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउनेलाई कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेलाई आग्रह गरेको छ ।
एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै काल्पनिक र परिचय...
आज सेयर बजार २.७ अंकले घट्यो
काठमाडौँ, २ साउन । आज नेप्से परिसुचक/सेयर बजार २.७ अंकले ओरालो लागेको छ । नेप्से परिसुचक बुधबार सुधार देखिएको थियो । आज ओरालो लागेको नेप्से एक हजार दुई सय ७२ कायम भएको छ । करिब १ बजे एक हजार दुई सय ८३ सम्म पुगेको नेप्से अन्तिममा आएर...
सेयर बजार सकारात्मक दिशामा, नेप्से परिसूचकको अवस्था के छ ?
काठमाडौं, ६ असार । विगतका केही वर्षदेखि सेयर बजार ओरालो दिशामा छ। २ वर्षअघि १९ खर्ब माथि पुगेको सेयर बजारको पुँजीकरण १३ खर्ब तल झर्‍यो।
बजार लगातार ओरालो लागेपछि सेयर लगानीकर्ताहरु आत्तिए। फलस्वरुप सेयर बजारका विषयमा गलत...
काठमाडौं, ५ बैशाख । लगातार बढ्दै आएको शेयर बजारमा आज पनि दोहोरो अंकको वृद्ध भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले वृद्धि भएको छ । कूल १५.२२ बिन्दुले बजार बढेर एक हजार २३२.२६ बिन्दुमा पुगेको छ ।
बैंक / बित्त • विजनेस
अमेरिका–चीन वार्ताको प्रभाव शेयर बजारमा
सिङ्गापुर, १६ माघ । व्यापारीहरूले अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भको नयाँ नीतिगत निर्णय र अमेरिका–चीन वार्तालाई पर्खिरहेका समय बुधबार एशियाली शेयर बजारमा मिश्रित प्रभाव देखिएको छ ।
जापानको शेयर बजारको लेखाजोखा राख्ने...
७.५७ अंकले घट्यो नेप्से
काठमाडौं, २ माघ । २ दिन लगातार उकालो लागेको सेयर बजार बुधबार भने घटेको छ । बुधबार नेप्से परिसुचक ७.५७ अंकले घटेर ११८७.९७ को बिन्दुमा कारोबार बन्द भएको हो ।
कुल १६९ कम्पनीको १७,४४,१८७ कित्ता शेयर खरिदबिक्री हुँदा ५३ करोड ६ लाख...
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट कति पुग्यो ?
काठमाडौं, १५ पुस । गत साता निकै उकालो लागेकोे सेयर बजार यो साताको पहिलो कारोबारमा नै दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्ज (नेप्से) परिसुचक १०.६२ अंकले घटेर १२०४.५४ विन्दुमा झरेको छ ।
आज कुल १ सय ६८ कम्पनीको १२,३६,३४३...